နောက်ထပ် Galaxy Note7သည်ဒေါ်လာ ၁,၃၈၀ တန်ဖိုးရှိသောဟိုတယ်တစ်ခုကိုပေါက်ကွဲစေပြီးပျက်စီးစေခဲ့သည် Gadget သတင်း
နောက်ထပ် Galaxy Note7သည်ဒေါ်လာ ၁,၃၈၀ တန်သောဟိုတယ်တစ်ခုအားပေါက်ကွဲစေပြီးပျက်စီးစေသည်
ပြီးခဲ့သည့်အပတ်က Samsung ၏ဘက်ထရီများတွင်ပေါ်ပေါက်ခဲ့သောပြtheနာများကြောင့်ကြေငြာခဲ့သည် Galaxy Note ကို 7၎င်းတို့အားပေါက်ကွဲစေနိုင်သောမိုဘိုင်းထုတ်ကုန်အသစ်ဖြန့်ချိခြင်းကိုရပ်တန့်ရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။ ၎င်းသည်သူတို့၏ပိုင်ရှင်များထံပေးပို့ပြီးသောပစ္စည်းအားလုံးကိုလည်းအစားထိုးလိမ့်မည်။
ကံမကောင်းစွာပဲသုံးစွဲသူများအားလုံးကသူတို့ရဲ့ Galaxy Note7ကိုပြန်ပို့နိုင်ခြင်းမရှိသေးဘူး။ မနေ့ကသတင်းအသစ်တစ်ခုရဲ့ပထမစာမျက်နှာကိုခုန်တက်သွားသည်။ တောင်ကိုရီးယားကုမ္ပဏီ၏အထင်ကရသစ်တစ်ခုမှပေါက်ကွဲမှု။ ဤအကြိမ်တွင်စုစုပေါင်းဒေါ်လာ ၁,၃၈၀ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုဖြစ်စေသည့်ဟိုတယ်တစ်ခုတွင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။
ဤဆောင်းပါးပါရုပ်ပုံများတွင်သင်တွေ့ရသည့်အတိုင်း Galaxy Note7သည်လုံးဝပျက်စီးသွားပြီးခေါင်းအုံး၊ အိပ်ရာနှင့်ကော်ဇောကိုပျက်စီးစေပြီးပိုင်ရှင်၏လက်ချောင်းတစ်ချောင်းကိုအနည်းငယ်ဒဏ်ရာရစေခဲ့သည်။
ယခုအချိန်တွင် Samsung သည်ဤကိစ္စ၏အမြစ်တွယ်မှုကိုယူထားပြီးဖြစ်သည်။ ဘက်ထရီပြproblemနာကိုဖြေရှင်းပြီးသော Galaxy Note7အသစ်ကိုသာကမ်းလှမ်းလိမ့်မည်ဟုသုံးစွဲသူအားအတည်ပြုခဲ့သည်။ ဆုံးရှုံးမှုအားလုံးအတွက်ဟိုတယ်မှပေးခဲ့သောဒေါ်လာ ၁,၃၈၀ ၏ငွေတောင်းခံလွှာအပြင်ထပ်မံတာဝန်ယူသည်.
Galaxy Note7ခံစားနေရသောပြproblemsနာများမှာအလွန်ဝေးကွာနေပုံရသည်။ သို့သော် Samsung သည်ပြproblemနာကိုနောက်ဆုံးအကျိုးဆက်များနှင့်ရင်ဆိုင်ရန်စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားပုံရသည်။
Samsung ကသူ့ရဲ့ Galaxy Note7သစ်ရဲ့ပြtheနာတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်လိမ့်မယ်လို့ထင်သလား။.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ယေဘုယျ » NOTICIAS » နောက်ထပ် Galaxy Note7သည်ဒေါ်လာ ၁,၃၈၀ တန်သောဟိုတယ်တစ်ခုအားပေါက်ကွဲစေပြီးပျက်စီးစေသည်
ပေါက်ကွဲ ပုံကြီးချဲ့သို့မဟုတ်တိုက်ရိုက်မုသာကိုသုံးသော။ အဝိဇ္ဇာသည်မည်မျှရဲရဲဝံ့ဝံ့ lithium Hahahaha ကိုပေါက်ကွဲစေနိုင်သနည်း။
စက်တင်ဘာ ၁၉ ရက်တွင် Samsung သည် Galaxy Note7ကိုအစားထိုးခြင်းလုပ်ငန်းစတင်မည်ဖြစ်သည်
Android Nougat 20 ဖြင့်ပထမဆုံးစမတ်ဖုန်း LG V7.0 သည်ယခုအခါတရားဝင်ဖြစ်သည်